Izincwadi zemidlalo ezinhle kakhulu
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili ze-basketball
Lapha iseva ibingomunye walabo okuthi, njengengane, bahlale kuze kube sebusuku ukuze babukele imidlalo ye-NBA ephawulwe nguRamón Trecet. Lezo kwakuyizinsuku zikaMichael Jordan, kaMagic Johnson, waseStockton kanye nopostman uMalon, wabafana ababi basePhiladelphia, kaDennis Rodman nokugabadela kwabo, kwe...
Izincwadi zebhola ezi-5 ezihamba phambili
Sengishilo kaninginingi ukuthi into yami bekungafanele ikhahlele ibhola, okungenani hhayi ngomusa omncane. Futhi-ke, emuva lapho ngineminyaka eyi-10 noma eyi-11 ubudala, ngathola ukuthi ibhola nezincwadi nakho kungaba nendawo yokuhlangana. ...
Umoya. Indaba kaMichael Jordan kaDavid Halberstam
Nge "ntela" yeNetflix kulowo owayengumdlali wezemidlalo emidlalweni yezindaba emhlabeni wonke, uMichael Jordan, owayengumhlonishwa wakhe wobuntwana (ngokuhlangana nezinsumansumane ebuntwaneni) uthola ukuthi ukuhamba kwesikhathi akunasihe ikakhulukazi ngezinkumbulo . Ukuzwa ...
Ngaphansi kwehuphu, nguPau Gasol
Kunesikhathi lapho ngigwinya yonke imidlalo ye-NBA esakazwa nguRamón Trecet ngoMgqibelo ebusuku ngeTVE. Mhlawumbe kwakungekho ngisho namaketanga azimele okwamanje ...
A Natural Talent, nguRoss Raisin
Akukaze kube kuhle ukubhekelela izifiso zabanye wena. Uma uzibeka engcupheni yokunqotshwa isilingo esiyingozi sokuzenza lokho abanye abakulindele ukuba ube yikho, ngaphezu kwakho konke oyikho noma okudingayo, ubhekana nengozi. Isibonelo se ...
Amanga ayisishiyagalolunye, nguPhilip Kerr
Ebholeni lesitsotsi kusenamagama asikisanayo phakathi kokukhathala kwe-hackneyed kanye nokukhahlela kwisichazamazwi. Uma sihlaziya igama elithi "amanga ayisishiyagalolunye", ngale kwencazelo yalo ezingeni lotshani, sithola i-dichotomy engenakuqhathaniswa embhalweni nasezincwadini zefilosofi. Kukhishwe kunoma yikuphi ...
How We Got to the Wembley Final, nguJoseph Lloyd Carr
Ingqophamlando yemidlalo esezingeni eliphezulu isinikeza uDavid omncane mayelana nokuwisa uGoliyathi oqhoshayo. Ngokuphikisana nalokho okuvame ukwenzeka empeleni, imidlalo yokuncintisana efana nebhola inikezwa kakhulu kulezi zingqinamba ezihlanya ezisondeza omncane ku ...
Usale kahle, uVicente Calderón, nguPatricia Cazón
Masibe namaqiniso. Uma kukhona ikilabhu lezinganekwane elisebenza kahle eSpain, yi-Atlético de Madrid. Inganekwane yenzelwe ukunqoba ubunzima nokuvela esihogweni ngemuva kokuwa okuyinhlekelele. Le ukuphela kwendlela yokufeza inkazimulo nokuthi yini eza nayo: inganekwane. ...